Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Emulator
Haddii aad rabto in la kordhiyo waayo-aragnimo ee ciyaarta jecel aad Android, halkan waxaa ka mid ah hogaanka qiimeeyo emulators kulan Android.Best Android Game Emulator Read More >>
JUC600 si fudud loo qeexi karaa sida nooc ka mid ah Android Mirror cable USB ama adabtarada ugu horayn loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo noocyada kala duwan ee ku jira ka taleefanka si laptop ama PC. Marka la soo koobo, waxay u dhaqmo sida connec buundo Read More >>
Liiskan adeegga Dooro qaado ah oo aad soo bandhigay dunida ah oo lacag la'aan ah kartiba oo waxaa ka buuxsamay farxad iyo biimayn. Read More >>
Kiniiniyada Android heshay dareenka badan malaayiin macaamiisha ee crystal weyn ay shaashadaha cad, ciyaaraha iyo qaababka badan garaafyada. Read More >>
Read adeegyada soo socda oo waxaad ogaan doontaan ugu sareeya 15 kulan android xiiso leh inaan la ciyaaro saaxiibadaa. Read More >>
Dadka qaarkood waxa ay raadinayaan tallaabo multiplayer in ka dhici karaa wakhti kasta oo meel kasta oo aan haysan si ay ku xirmaan la gaarin in ay internet ah. Read More >>
In this article, waxaana dooneynaa in aad soo bandhigto 20 biimayn oo kulan xiiso leh in ordi Android. Qaar ka mid ah waxaa la bixiyaa oo qaar ka mid ah waa lacag la'aan. Read More >>
Waxaa jira pack ah ilaaliyaal in effortlessly lifaaqi kartaa qalabka Android aad iyo aad ciyaari karo kulan waqti. Read More >>
Iyadoo kulamo badan android suuqa daadad, waxaad si fudud u heli karaan qasan oo ka mid ah in la doorto. Read More >>
Kulan xujo ama kulan ku maqan yihiin guud ahaan lagu yaqaan ay caqabado fikradeed oo macquul ah. Khubarada ayaa soo jeediyay this kulan oo lacag la'aan ah wax ku qariyeen ku sifayn android sida IQ kulan oo kobcinaya. Read More >>
Suuqa android waa daad, la kulan ku saabsan dhammaan niches oo halkan waa liiska ugu wanaagsan ee 20 kulan oo dagaal android in ay ka qiimo isku dayaya. Read More >>
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah kulamada in kuwii ku caashaqi jiray android ciyaari lahaa oo ay si fudud looga heli karaa mobile9.com iyo sidoo kale qaar ka mid ah website-yada kale ee kulan. Read More >>
Waxaa khalad ma noqon doono in ay sheegeen in ay tahay ciyaar caan ah oo dhan kulan yaqaan world.Read ee soo socda oo waxaad ogaan doontaan dheeraad ah oo ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta. Read More >>
Halkan waa toban kulan oo ku guuleysatay Quluubta kulan ku caashaqi jiray sababo badan oo ay ka mid yihiin mawduucyada, naqshadeynta, adventures iyo maskaxdaada waxay afuufayeen xujooyinka. Read More >>
Isticmaalka technology 3-geesood ah waxaa si balaadhan loo isticmaalay adduunka ciyaaraha ah. Suuqa ciyaaraha Android waa hore u caansan ka mid ah taageerayaasha iyo horumarinta waxaa mar kasta ku hayaa inaan u adeegno dadka isticmaala ay ku raacin Read More >>
Ma waxaad raadineysaa ugu fiican kulan Android? Eeg dheeraad ah lahayn, maxaa yeelay cajiib ah, madadaalo iyo ugu fiican android kulan 2015 ayaa la soo xulay si taxadar leh. Read More >>